« Tsy misy etika » -
AccueilTresaka« Tsy misy etika »
« Tsy misy etika »
18/06/2018 admintriatra Tresaka 0
Voaporofo izao fa tsy mety amin’ny kolotsaintsika Malagasy ny foto-kevitra entin’ny fanapahana navoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, saingy tsy maintsy tanterahina mba ho tombontsoa ambonin’ny firenena. Tsy mety amintsika ny “cohabitation” na ny fiaraha-mitantan’ireo minisitra samy hafa firehana. Efa tanjona iray izao no apetraka dia ny fiatrehana ny fifidianana eken’ny rehetra, mbola misy ihany ny mitsangana ho lasa volo manoha-randrana. Lasa ilay fiaraha-mitantana indray izao no olana vaovao atrehan’ny firenena. Vao tonga ao anatin’ilay minisitera misy azy ohatra ry Christine Razanamahasoa dia efa ny fikitihana ny lalàna momba ny ZES no mahamaika azy. Angaha moa hikitika lalàna nandaniana fotoana sy nandanian’ny Antenimiera ron-doha no antom-pisian’ireo minisitra 4-bolana ireo. Hanomana fifidianana eken’ny rehetra no antom-pisian’ity governemanta vaovao ity, ary ny fotoam-piasan’izy ireo eo aza efa voafetra. Tsy hanao ny asa lavitr’ezaka tahaka ny fampiatoana na fampijanonana ny ZES izy ireo. Filam-baniny sy filam-boatsiary fotsiny ny an-dry Christine Razanamahasoa raha miresaka momba io lalàna momba ny Zes io.
Asa tokoa na izy efa somary nahazoazo taona na ahoana fa dia tsy ahitana taratry ny maha olona hitondra fiovana tokoa ny fomba fiasan’i Christine Razanamahasoa. Toa tahaka ireny renibe mila vaniny amin’ny zafikeliny ireny. Ireo minisitra avy amin’ny Mapar hafa mantsy dia hita ho manaja tsara ny lalan-jotran’ny fitondrana mpanatanteraka. Ny minisitra Irmah, minisitry ny Mponina ohatra avy hatrany dia nanao asa sosialy nizara fanampiana ho an’ireo sahirana sy niangaran’ny vintana. Toa izany koa ny minisitra hafa izay nanambara sahady fa ny fanohizana ny asa vitan’ireo minisitra teo aloha no zava-dehibe. Tsy hisy ny fandraisana fanapahan-kevitra lehibe ao anatin’izao governemanta izao fa ny fanatanterahana fifidianana eken’ny rehetra no tanjona.
Hita araka izany fa olana manokana avy aminy mihitsy no mahazo an’i Christine Razanamahasoa fa tsy noho ny maha Mapar azy akory. Ny azy mantsy, na ny anaran’ny Filoham-pirenena nanendry azy sy naha minisitra azy aza tsy sahy tononina. Raha efa zoky olona toa azy no tsy manana etika politika toa izany, inoana marimarina fa tsy misy fiovana antenaina aminy mihitsy. Resaka etika mihitsy no olana eto. Efa minisitra ao amin’ilay fahefana mpanatanteraka enao, ka na ho inona na ho inona dia io Filoham-pirenena novingavingainao io aloha no Filoham-pirenena, ka tokony hajaina.
Taorian’i Toamasina sy Antsiranana, anjaran’i Toliara indray ny mampiantrano ny filankevitry ny minisitra mivelatra. Araka ny fandaharam-potoana mantsy, ny alarobia izao no hanatanterahana izany ao amin’ny tranoben’ny Faritra Atsimo Andrefana ao Toliara ihany. Anisan’ny lohahevitra ...Tohiny
Minisiteran’ny Atitany : Antoko pôlitika 55 isa mety hofoanana